वचनहरू, सेट वाक्यांश, बोली को तथ्याङ्कले - यो सबै हाम्रो जीवनमा सबैतिर हुन्छ। तिनीहरूले चलचित्र र रेडियो, टेलिभिजन, साहित्य मा, यो पूर्ण यसलाई भरिएका छन्।
"- कुनै समस्या कुनै मानिस": रोचक बाहिर क्रमबद्ध गर्न भने जो छ। यी शब्दहरू अक्सर ज्ञात टेलिभिजन च्यानल दुष्ट, नायक धेरै आपराधिक श्रृंखला को मुख मा राख्न छन्।
एक comrade Iosifa Vissarionovicha Stalina (Dzhugashvili) - हामी हाम्रो देश को पढाइ जनसंख्या एउटा सानो सर्वेक्षण बनाउन भने, धेरै पहिलो पटक लोकप्रिय अभिव्यक्ति "मान्छे को नेता" को ओठ बाट उड्यो भनेर भन्नेछु। सोभियत संघ को इतिहास देखि यो मानिस एक क्रूर व्यक्ति, को "मान्छे को शत्रुहरू" विरुद्ध सबैभन्दा चरम उपाय सक्षम थियो ज्ञात छ।
तिनीहरू, यी "मानिसहरूले शत्रु" थिए? इतिहासकारहरूका अनुसार, मुख्य अक्सर षड्यंत्र र betrayals मानिसहरू आशङ्का। incredulity नै यस प्रकारको नै भयावह छ। शायद, व्यक्ति छ एक सतावट जटिल विकास - यो मानसिक विकारहरु को एक। उनको सहयोगिहरु देश को टाउको एक कठिन नजर, आफ्नो दबेको ऊर्जा, थियो कि शंकास्पद थियो र डरले आफ्नो Entourage राखिएको उल्लेख गरे।
तर हुनुको शक्ति "शुल्क मा", stalin कुनै पनि कार्यहरू, राजनीतिक expediency को रूपरेखा तिनीहरूलाई आग्रह उठयो सक्छ। जसले यसो भने गर्न रूपमा प्रश्न स्पष्ट गर्न: "कुनै मानिसले - कुनै समस्या", यो अभिव्यक्ति पर्छ कि Iosifu Stalinu मान गर्न व्यावहारिक छ।
यो यस्तो "बोल्ड" एक व्यक्ति यस्तो कुरा कहिल्यै भन्न सक्छ कसरी बयान, को अर्थ बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
- कुनै समस्या कुनै मानिस: तर वास्तवमा, ती दिनमा मृत्यु सबै समस्या solves। दमन को वर्ष प्रवेश मा कालो funnels जनसंख्याको बीचमा आतंक कारण। पक्राउ शिविरमा, "मानिसहरूले शत्रु" - सोभियत संघ को लागि 30 सेकेन्ड र 40S को तीतो प्रतीक। इतिहासकारहरूले दमन "छालहरू" को चरणमा कल। यस पक्राउ जादू, शिजोफ्रेनिक को जादूगर द्वारा भने ठाउँ लिए।
चिकित्सा (प्रसिद्ध "डाक्टर 'मामला") मा, सेना (को प्रतिभाशाली प्रमुखहरूलाई गोली थिए) मा: stalin शत्रुहरू चारैतिर कल्पना। यसबाहेक, साधारण मान्छे बीच - कार्यकर्ता, किसान र बुद्धिजीवियों को पर्याप्त नम्बर थिए "सोभियत शक्ति अपराधीहरूमाथि।" वास्तवमा, मान्छे हटाइ, "यो मानिसहरूका को नेता" र समस्या उहाँले लाग्यो रूपमा निर्मूल।
Shootings र शिविरमा कसैले छक्क हुनेछ धेरै फैलाउन छन्। जेलमा वाक्य विचलता छन् - 25 वर्ष को एक औसत। त्यहाँ बोली एक स्वतन्त्रता को कुनै प्रश्न थियो। तर एक नागरिक चेतना रूपमा प्रोत्साहन थियो कि खराब कुरा: denunciation र निन्दा। छिमेकी - प्रत्येक अर्को छिमेकी को एक denunciation लेख्न सकिएन। त्यहाँ अविश्वास र शङ्काको एक वातावरण थियो। यो अनौठो कुरा यो तीतो वास्तविकता मा मान्छे तरिका, एक परिवार निर्माण र बच्चाहरु जुटाउने, प्रेम बस्न व्यवस्थित छ।
ताकि जसले यसो भने?
माथिको सबै नेता को पोस्ट वितरित एक उत्पीडक, एक despot, एकदम पर्याप्त छैन मानिस, भाग्य द्वारा रूपमा comrade Dzhugashvili characterizes। स्टालिन शाब्दिक शारीरिक आफ्नो मान्छे नष्ट भएको थियो कि, पखेटा अभिव्यक्ति को आफ्नो लेखकत्व को एक उच्च सम्भावना भन्छन्।
त्यसैले, जसले यसो भने: "कुनै मानिसले - कुनै समस्या"? का इमानदार हुन गरौं, यो उच्चारण सक्छ "मान्छे को नेता", यो आफ्नो तरिका थियो। कुनै अन्य जस्तै उहाँले यस्तो ऐतिहासिक तथ्य को आधारमा योद्धा औपनिवेशिक आक्रामकता कुरा भन्न हिम्मत थियो। कुनै एक प्रमाणित सक्छ रूपमा साँचो छैन।
माझिहरु। को Arbat को बच्चाहरु
जतिसुकै क्रूर, उहाँले होसियार र धूर्त एक राजनीतिज्ञ रूपमा थियो एकै समयमा "stalin"। खुल्लमखुल्ला उहाँले सही आफ्नो हत्यारा मनसाय बारेमा थिएन घोषणा गर्दछु। तर त्यहाँ बयान "- कुनै मानिस छ त्यहाँ एउटा समस्या छ, - कुनै समस्या मानिसहरू हुन्" पर्छ जो पहेली, गर्न समाधान छ।
को चिरपरिचित सोभियत लेखक Anatoliy Naumovich Rybakov 1987 मा प्रकाशित भएको थियो जुन एक उपन्यास "को Arbat को बच्चाहरु", सिर्जना गरियो। संग "प्रकाश हात" लेखक क्याच वाक्यांश नेता को मुख मा राख्न थियो। यो काम छ, stalin भन्नुभयो: "मृत्यु सबै समस्या solves कुनै मानिसले, र कुनै समस्या छ।"। काम मा Tsaritsyn (1918) सैन्य विशेषज्ञहरु को शहर मा एक शूटिंग थियो।
प्रसिद्ध अभिव्यक्ति पाठक ऐतिहासिक क्षण को प्रामाणिकता रूपमा कम से कम पक्कै छैन भनेर, त्यसैले धेरै Dzhugashvili संग राखन छ। हुनत सम्पूर्ण यो वास्तवमा कल्पना उपन्यास लेखक छ - Rybakov।
प्रतिलिपि अधिकार पहिचान
Rybakov आफूलाई लोकप्रिय अभिव्यक्ति श्रेय छ किन Iosifu Stalinu छक्क परे। उहाँले यो वास्तवमा पनि अलि लेखक निराश, यो वाक्यांश को लोकप्रियता ध्यान आकर्षित। साथै, किनभने यो छ माझिहरु एक लोकप्रिय अभिव्यक्ति साथ आउन! उपन्यास "को Arbat को बच्चाहरु" मा - र पत्रकार संग आफ्नो कुराकानी मध्ये Valery Lebedevym Anatoliy Naumovich वाक्यांश "कुनै समस्या कुनै मानिस" तिनीहरूलाई लेखन स्वीकार। पहिलो त्यो आफ्नो भाषण केही कुन वर्ष जहाँ यो stalin भने पत्रकार, सोध्न गर्न प्रयास गर्नुभयो? यी प्रश्नहरूको जवाफ फेला परेन छन्।
को क्याच वाक्यांश मानिसहरूलाई बायाँ भने, यो लेखक आदर गर्दैन! पछि 1997 मा, Rybakov स्वीकारे छ "Romanée-स्मृति" "कुनै मानिसले - कुनै समस्या" भन्दै कि, उहाँले आफ्नै साथमा आए। र त्यो आफ्नो चरित्र महसुस छ किनभने Anatoliy Naumovich यसलाई गरे। विचार नेता निर्माण र भाषण कस्तो उहाँले विशेषता रूपमा उहाँले intuitively लाग्यो। ऐतिहासिक, लेखकले छैन गलत थियो। क्रूर वाक्यांश मा समातिए र को प्रतीक एक प्रकारको भयो "Stalinist जाडो।"
उपन्यास को लोकप्रियता
Rybakov उपन्यास "को Arbat को बच्चाहरु" एक furor कारण र धेरै लोकप्रिय भयो। यो काम को कहानी छ र जसले यसो भने को प्रश्न मा हामीलाई जिम्मेवार छ: "कुनै मानिसले - कुनै समस्या"। साथै, उपन्यास यस लोकप्रिय अभिव्यक्ति महत्त्व बताउँछन्। उहाँले प्रेस मा एक चलाउनु कारण र आफ्ना पाठकहरूलाई को मन गरियो। यी वर्षहरूमा धेरै ऐतिहासिक घटनाहरू reinterpretation गर्न subjected।
उपन्यास को 30 सेकेन्ड मा जन्म र vzroslevshih थिए जो मानिसहरू को कठिन जीवन को कहानी बताउँछ। यो stalin गरेको totalitarian शासन सत्य प्रकट गर्छ। काममा लेखक उहाँले मानव जीवन को उदाहरण को लागि अंक सबै जो, यो भयानक मिसिन कसरी काम बुझ्न खोज्छ। राजनीतिक "मुद्दाहरू" समाधान गर्न संयन्त्र stalin गरेको शासन मा शुरू र शारीरिक अर्थमा शाब्दिक मानिसहरूलाई नष्ट भएको थियो।
समय पत्रिका यसको आवरण मा छवि धेरै पटक, "comrade stalin" राखे। नेता को डबल पोर्ट्रेट "यस वर्षको व्यक्ति" रूपमा आवरण मा राखिएको थियो। को "व्यक्तित्व को पंथ" को विरोधीहरूले बारम्बार stalin लेखिएको थियो कथित शो र प्रसिद्ध कथन थियो जसमा, तिनीहरूलाई को एक को अस्तित्व बारे लिखित छन्: "। कुनै मानिस - कुनै समस्या" त्यहाँ collectivization थियो। यो फेब्रुअरी 1993 मा भयो। यो आवरण भर्खरै stalin वाक्यांश स्वामित्वको प्रमाण रूपमा काम गरे।
वास्तवमा, यो आवरण अवस्थित छैन। इन्टरनेटमा हिँड्छ भन्ने उनको छवि - सामान्य नक्कली। तपाईं पनि (फेब्रुअरी 6, 1933 मा जारी) एक वास्तविक पत्रिका आवरण छवि समय पाउन सक्नुहुन्छ।
र एउटा नक्कली के बनाएको छ? यो प्रश्न कुनै एकल जवाफ छ। मलाई लाग्छ: stalin को विरोधीहरूले त जोसिलो भई उहाँको यो कदम लिएको छ कि प्रसिद्ध aphorism बतान गर्न चाहन्थे। उनीहरू भन्छन्, तपाईं सधैं सामान को सत्य पुष्टि उल्लेख गर्न सक्छन् जो वाक्यांश Iosifu Vissarionovichu Stalinu वास्तविक स्रोत हो।
"- कुनै समस्या कुनै मानिस": यो जसको शब्द बारे बहस रोक्न समय छ कि अन्तमा हुनुपर्छ। मुख्य कुरा यो अभिव्यक्ति को मूल्य स्पष्ट छ, यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्ति स्पष्ट छ कि छ।
प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन? वाशिंगटन मा स्मारक, वर्णन, इतिहास, यात्रा जानकारी
शानदार नदी Currant कहाँ छ
रोचक नुस्खा कोदो porridge
मास्को, "माली" (बजार): ग्राहक समीक्षा
1990 को लागि गोली टन: सुविधा र समीक्षा। कार्य "स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटको 1990 rubles को लागि टन"
एक विशेषण के प्रश्नबारे छन्? प्रश्न विशेषण। छोटो विशेषण को प्रश्न
युक्रेनमा यांत्रिक: उद्योग र वर्तमान रुझान